एनसेलले जानेबुझेकैलाई त यसरी ठग्न खोज्छ भने अरुलाई के गर्ने होला – MySansar
एनसेलले जानेबुझेकैलाई त यसरी ठग्न खोज्छ भने अरुलाई के गर्ने होला
यो एनसेलले कर तिर्ने, नतिर्ने वा कर छलेको विषयमा ब्लग होइन। म एनसेलको प्रयोगकर्ता हुँ। प्रविधिमा आफूलाई अलि बुझेकै ठान्छु। म जस्तो मान्छेलाई त एनसेलले सीधै ठग्न खोज्यो भने अरु सामान्य मानिसहरुलाई के गर्ने होला भन्ने सोचेर दङ परेको छु।
कुरा यसो हो। म एनसेलको प्रयोगकर्ता हुँ। एनसेलको एउटा सिम मैले मेरो एउटा त्यस्तो मोबाइलमा राखेको छु, जसमा ‘टच’ चल्दैन। टच प्याड प्रयोग गरेर कल रिसिभ वा डायल गर्ने गर्छु। यो मोबाइलमा म इन्टरनेट चलाउँदिन। मात्र कल रिसिभ वा डायल गर्ने काम हो यसमा। इन्टरनेट चलाउनका लागि मेरो अर्कै मोबाइल छ जसमा डेटा सिम राखेको छु।
आइतबार यो मोबाइलमा एक्कासी एउटा एसएमएस आयो। त्यसमा लेखिएको थियो- स्पोर्टसाइ विक्ली तपाईँको अकाउन्टमा एक्टिभेट गरिएको छ। यसको शुल्क १९.९३+५.५२ पर्छ र यो एक हप्तामा रिन्यु हुनेछ।
ए बाबा अचम्म, हैन मैले केही गरेकै छैन कसरी कसले मेरो अकाउन्टबाट पैसा काटिने गरी एक्टिभेट गर्‍यो? त्यो पनि हरेक हप्तै पिच्छे रिन्यु गर्दै पैसा काट्दै गर्ने गरी?
मैले एनसेलको कल सेन्टरमा फोन गरेँ। एक्टिभेसन मेसेज आज बल्ल आएको छ। तर कल सेन्टरले भने अस्ति नै एक्टिभेट भइसकेको थियो पो भन्छ त। लाज पचेकाहरु।
कल सेन्टरले मलाई भने अनुसार यस्तो एक्टिभेट हुने कि इन्टरनेटबाट गरिन्छ, कि एसएमएसको रिप्लाइ पठाएपछि हुन्छ। मैले सबै मेसेजहरु हेरेँ, अहँ मलाई यसबारे कुनै मेसेज आएको पनि छैन, मैले रिप्लाइ गरेको पनि छैन। हेरे हुन्छ एसएमएस डिटेल।
त्यसैगरी यो सिमबाट मैले इन्टरनेट कहिल्यै चलाएको पनि छैन। हेरे हुन्छ, कम्पनीमा होला नि डिटेल।
मैले केही गर्दै नगरी मेरो अकाउन्टबाट पैसा काटिने गरी अझ एक हप्तामा रिन्यु समेत आफै हुने गरी कसले यसरी यो कुरा एक्टिभेट गर्‍यो? उपभोक्तालाई सीधै यसरी ठग्न पाइन्छ?
मैले त यो कुरा याद गरेँ। अरु धेरैले त याद पनि गरेका छैनन् कि। कतिलाई त अङ्ग्रेजीमा लेखिएको यो मेसेज पढ्न पनि आउँदैन कि। उनीहरुको खाताबाट उनीहरुलाई थाहै नदिई पैसा त लुटेको लुट्यै हुँदैन त?
के हो एनसेलको पारा?
6 thoughts on “एनसेलले जानेबुझेकैलाई त यसरी ठग्न खोज्छ भने अरुलाई के गर्ने होला”
हामी सोझा नेपालीलाई ठग्छ भन्ने थाहा भएर मैले दुई बर्ष जति अगाडी NCELL चलाउन छोडेर NTC लिएँ तर सरकारी NTC ले पनि NCELL कै सिको गरेर जनता ठग्‍न थालेको रहेछ। म NTC बाट पनि नराम्ररी ठगिएको छु।
एउटा साथिलाई फोन गर्दा घण्टी बज्‍नु अघि नै ” *9 थिच्‍नुहोस्” भन्‍ने आवाज आयो। कल गर्दा *9 थिच्‍नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेर थिचे तर कुराकानी सकिएपछि एकछिनमा रिङ ब्याकटोन एक्टिभ भएको र ३८.३१ ब्यालेन्स काटिएको म्यासेज आयो। १४९८ मा कम्प्लेन गरें तर चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। एक महिनापछि फेरी रिङ ब्याकटोन रिन्यु भएको र ३८.३१ ब्यालेन्स काटिएको म्यासेज आयो। टेलिकमको पुल्चोक अफिसमा गएर कम्प्लेन गरें त्यहांका कर्मचारीले रिङ ब्याकटोन सर्भिस एक्टिभ भएको रहेछ हटाईदिएको छु अर्को महिना देखि पैसा काट्दैन भने तर आफैं कसरी एक्टिभ भयो भनेनन्। एक महिना पछि फेरी आफैं रिन्यु भएर ३८.३१ ब्यालेन्स काटियो। पुल्चोक अफिसमा कम्प्लेन गर्न गएको सुन्धारा जानुपर्छ भने। सुन्धारा गएर ४-५ जना संग कुरा गरेपछि एकजनाले तपाईंले फलानो नम्बरमा कल गर्दा *9 थिच्‍नुभएको रहेछ त्यसैले ब्यालेन्स काटिएको हो भन्‍नुभयो। बल्ल थाहा पाईयो *9 थिच्दा रिङ ब्याकटोन एक्टिभ हुने रहेछ र एकपटक एक्टिभ भएपछि सधैंभरी रिन्यू भईरहने रहेछ। पुल्चोकका कर्मचारीले सेवा हटाईदिएको नमिलेकोले फेरी रिन्यू भएको रहेछ।
कल गर्दा अरु केही जानकारी नदिई *9 थिच्‍नुहोस् भन्ने, थिच्दा के हुन्छ कति चार्ज लाग्छ केही नभन्‍ने, हरेक महिना स्वतः रिन्यू गरि ब्यालेन्स काट्ने र एकपटक एक्टिभ भएपछि ग्राहकले हटाउनै नसक्ने गरी NTC ले नियतपूर्वक ठगी गरेको थाहा भयो। म जत्तिको ग्राहक त ठगिएँ भने NTC ले सोझा ग्राहकलाई ठगेको छैन होला? NCELL त महाठग हो ग्राहक ठग्‍ने कुरामा NTC पनि कम रहेनछ।
जुन दिन एनसेलका पुराना साहुहरुले नेपाललाई तिर्नु पर्ने अर्बौ रुपैया कर नतिरी कम्पनी बेचेर भागे भन्ने सुने त्यो दिनदेखि एनसेलका ४ वटा सिम फ्यालिदिएको । जहिलेसम्म कर तिर्दैन त्यो बेलासम्म एनसेल युज गरिंदैन । जतिसुकै ठगोस आफु परिंदैन । परिवारका सदस्यलाई पनि एनसेल युज नगर्न सुझाव गरिसकेको छु, सबैले मानेका पनि छन् ।
Nepal ko savai bhanda chor ra luta company ho NCELL
This is not new. Ncell does it to me as well. I also consider myselfawell versed person in terms of internet and its good and bad aspects. I wouldn’t have known it if I hadn’t checked the CDR. More frustrating was when I could not call 9005 to lodge the complaint and I could not deactivate that shit service via SMS. I had to call them from another phone and then the call center could be called. The service then was “unsubscribed” by Ncell andaconfirmation SMS came afteracouple of days. The call and internet service is good but they target certain types of customers intentionally and inaplanned way. I can only imagine what could be happening with so many common people that are forced to use Ncell for communication purposes. If only NTC had better plans and sincere staff members, we wouldn’t need any other provider.
Thanks to you Mysansar for providing me the opportunity to share my experience.
प्रबिधीको बारेमा बुझेको मान्छेले NCELL को बारेमा पनि त थाहापाउनु पर्थ्यो नि । NCELL ले अपार्दसी ढङ्गले ब्यालेन्छ काट्छ भन्ने न्युज बारम्बार अाएकै हुन्छन् । त्यै भएर सम्भब भए सम्म NCELL नचलाएकै जाति ।
म तीनहप्ता नेपाल बस्दा एनसेलको रिचार्ज सीम कार्ड स्मार्ट फोनमा चलाएको थिएँ।
एक पटक पछिल्ला पाॅच चार्जहरुको रेकर्ड हेर्दा एउटा गेमकोलागी १२ रुपैॅया खाई दिएको रहेछ।
समय नभएकोले कम्प्लेन गर्न सकिएन। तर, बित्थामा यसरि पैसा खाॅदो रहेछ भन्ने थाहा भयो।
यसरि कति खाएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ।